Public Health in Myanmar: အသည်းသမားတို့အတွက် သင့်တင့်သော LifeStyle
ကျွန်မမှာ ဘီပိုးရှိပါတယ်ဆရာ။ နိုင်ငံခြားသွားဖို့ ဆေးစစ်တော့မှ ရှိမှန်းသိတာပါ။ အရင်က မသိခင်ကတော့ မတည့်တာတွေလည်း စားမိမှာပေါ့ဆရာရယ်။ အခုတော့ေ၇ှာင်ပါတယ်။ ရှင်လျှက်နဲ့ သေသလို လည်း ခံစားနေရဆဲပါ။ ဆရာဝန်ပြပြီး ကုသခံနေဖို့ ကလည်း မတတ်နုိင်တော့ အခုတော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဆရာ။ တခုသိချင်တာက ကျွန်မတို့ အတွက် မစားရတာတွေကများတော့ အဟာရမှ ရှိပါ့မလားလို့ တွေးမိတာပါဆရာ။ ဥပမာ. သံဓါတ်ပါတာတွေ၊ နို့ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ထောပတ်တို့ ချီ့ စ် တို့ ၊ ကြက်ဥနဲ့ ဘဲဥတို့ လိုတွေ၊ ဆီကြော်တွေ၊ အချဉ်ဓါတ်တွေရှိတဲ့လိမ်မော်သီးတို့ ၊ ပန်းသီးတို့ တွေ၊ မုံလာဥတွေ၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေ စသဖြင့်ပေါ့ဆရာရယ်၊ ကျွန်မသိချင်တာက လုံးဝကို အဲ့ဒီ့အစားအစာတွေ မစားရတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် နဲနဲလောက်တော့ စားရင် ရပါသလားဆရာ၊ အဲ့ဒီ့အစားအစာတွေ မစားရဘူး ဆိုတာသိထားတော့ ကျွန်မမှာ ကြက်သား၊ နဲ့ ပုဇွန်က လွဲလို့ ဘာမှ စားစရာမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ တခုခုစားမယ်ဆိုရင် ဥပမာ အပြင်မှာ ထမင်းကြော် စားမယ် ဆိုရင်တောင် ကြက်ဥနဲ့ မုံလာဥကတော့ အနည်းငယ်ပါနေတာဘဲမဟုတ်ပါလားဆရာ၊ ဆေးလိပ်တို့ ကွမ်းယာတို့ အရက်တို့ ကတော့ ရှောင်ပြီးသားပါဆရာ။ ဆေးဖိုးနဲ့ ဆရာဝန်ခ မတတ်နိုင်တဲ့ကျွန်မ အဖို့ အစားအသောက်လေးကို ဘယ်လို စားသောက်သင့်သလဲ၊ အထက်ဖေါ်ပြပါ အစားအစာတွေက လုံးဝရှောင်ရမှာလား၊ နဲနဲ စားလို့ ဖြစ်ပါသလားဆိုတာ သိခွင့်ရှိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သက်ဆိုးမရှည်နိုင်ဘူး လို့ တွက်ထားပြီးသားပါဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ။ လေးစားစွာဖြင့်
ဘီပိုးရှိတိုင်း နာတာရှည်အသည်းရောင်ရောဂါမဖြစ်ပါဘူး။ အလွန်နည်ပါးသော အရေအတွက်ကသာ အသည်းရောင်တာပါ။ လူတစ်ရာမှာ ၉၀ လောက်က ပိုးရှိပေမယ့် ဘာ sign မှ မပြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရှင်လျက်နဲ့ သေတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘီပိုးအတွက် အစာရှောင်တာကြောင့် အာဟာရ မချို့တဲ့ပါဘူး။ စားချင်တိုင်းတော့ စားလို့မရဘူးပေါ့။ ကြက်ဥစားလို့ရပါတယ်။ အသားတွေလည်း စားလို့ရပါတယ်။ လုံးဝရှောင်ရမည့် အစာတွေကို ကျွန်တော် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျန်တာတွေက အာဟာရဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင့်တင့်ရုံစားလို့ရပါတယ်။ အပြင်စာတွေထဲမှာ လမ်းဘေးမှာရောင်းတဲ့အကြော်တွေ၊ ၀က်သာဒုတ်ထိုးတွေ၊ လက်သုပ်စုံတွေ၊ ရှောင်ရမယ်။ လုံးဝမစားသင့်ပါ။ နောက်ပြီး ဘာစားစား ဆိုးဆေးပါတာ မစားပါနှင့်။ ဘာတွေက ဆိုးဆေးပါလဲဆိုတော့ အစာတစ်ခုစားခါနည်းတိုင်း သတိထား ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ ဒီအသား၊ ဒီအရွက် က သဘာဝအရောင်လား၊ ဆေးဆိုးထားတာလားဆိုတာကို။
I have Hepatitis B positive. Now I am living in abroad and I can't effort to have treatment in here. I just like to know whether I can take liver tablets for the time being? If possible please indicate me which one would be suitable?
First of all, having Hepatitis B virus alone does not mean you need to take treatment. There are millions of people around the world living with HBV and no treatment is needed. Whether to take treatment or not, you first need to consult withaliver specialist. But it depends on your financial situation. If you follow recommendations from my post, your health will be greatly improved without taking any medication. I do not have necessary qualification to tell you which hepatic medicine is good for you.